ISigaba seSithathu seMveliso yeeVolvo zoVavanyo lweeVolthi
Uhlobo lwe-C lwe-USB, ukuhanjiswa kwamandla kunye nokubonelelwa kwamandla
Uyilo lwe-USB (i-Universal Serial Bus) ibisetyenziswa njengomgangatho wezihlanganisi kunye neempawu ezinxulumene noko kunye nokunikezelwa kwamandla ukusukela ngo-1996. Ngeli xesha kubekho utshintsho oluninzi kwiinkcukacha zokuphucula ukusebenza kweenkqubo ezisebenzisa le migangatho. Emva kwexesha ...
Ishaja ye-USB (ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB)
I-USB iguqukile kunxibelelwano lwedatha olunakho ukubonelela ngombane olilinganiselweyo kumnikezeli wamandla ophambili ngombane wedatha. Namhlanje izixhobo ezininzi zihlawulisa okanye zifumana amandla kuzo kumazibuko e-USB aqulethwe kwiilaptops, iimoto, iinqwelomoya okanye iziseko zodonga. I-USB iye yaba sisokethi samandla esixhaphakileyo kubaninzi ...
Ukuchazwa kwe-USB-C kunye nokuhanjiswa kwamandla
Emi ebusweni bePower Gan tshaja ngamazibuko amabini amatsha: Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB-C kunye ne-USB-C. Eyokuqala kuphela izibuko le-USB-C elisebenzisa imilinganiselo yokutshaja ye-USB 3.1 ukuya kuthi ga kwi-3 amps. Eyesibini ixhasa itekhnoloji yokutshaja ekhawulezileyo ebizwa ngokuba yiPower Delivery. Ukuhanjiswa kwamandla (PD) i ...
Uphuhliso lweTrend yeGaN USB Charger
Itshaja yamandla eGaN (gallium nitride) ibinokubakho okubonakalayo kwi-CES kwi-2020-ibonisa ukuba kulo nyaka kuya kubakho umdla omkhulu nokwamkelwa kwezi zincinci, ukutshaja ngokukhawuleza, kunye nezixhobo ezonga amandla. Phakathi enyakeni, kukho ubungqina obuninzi oku kunjalo. Inkqubo ...
IHuawei esongekayo Iselfowni yefowuni enguMlingani X2
Kutshanje, isizukulwana esitsha esilindelwe nguHuawei sokugoba iselfowuni Mate X2 ekugqibeleni ikhutshwe ngokusemthethweni. Le fowuni yexabiso lixabise phantse i-3000USD ixhotyiswe ngenkqubo ye-5nm yeprosesa yeflegi ye-Kirin 9000. Emva kokuvela, ubungakanani bescreen bufikelela kwii-intshi ezi-8. Yamkela ...
Nangona kunjalo, lo mbandela wokuhambelana uza kuba yinto yexesha elidlulileyo kunye nokwaziswa kweNkcazo yokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB. Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB (okanye iPD, ngamafutshane) ngumgangatho omnye wokutshaja onokusetyenziswa kuzo zonke izixhobo ze-USB. Ngokwesiqhelo, isixhobo ngasinye esihlawuliswe yi-USB siya kuba ...